အကယ်၍မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ Digital Marketingနဲ့ Website လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ?
ကျွန်တော်တို့MWSဟာဆိုရင် မြန်မာ့Digital နှင့် Web လောကမှာ နှစ်ကာလရှည်ကြာ အတွေ့ကြုံ များနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင်လက်ရှိ နာမည်ကျော် Brand များကိုလဲ Digital Marketing ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ Websiteပိုင်းတွင်လဲ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ Website များ၊Top 10 ဝင်လုပ်ငန်းကြီးများ၏ website များအပါအဝင် website ပေါင်း များစွာကို အောင်မြင်စွာပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Team ကိုလဲ ကျွန်တော်တို့မှာပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ယုံကြည်နိုင်ပါတယ် …..???